Thenga i-Mibolerone powder (3704-9-4) hplc =98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Anabolics Steroids / I-Trenbolone ye-powder Series / I-Mibolerone powder (i-3704-9-4)
SKU: 3704-9-4. Categories: I-Trenbolone ye-powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa kanye nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugramu ukuya ku-mass mass ye-Mibolerone powder (3704-9-4), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
Ividiyo ye-Mibolerone powder
I-Mibolerone powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-Mibolerone powder
Formula Yamamolekhula: C20H30O2
I-Melt Point: I-168-171 ° C
Isitoreji Sokugcina: Isiqandisisi
Umbala: Mhlophe noma Vala i-powder emhlophe
Umjikelezo weMibolerone powder
Amagama Amakhemikhali: i-dimethylnortestosterone, iMibolerone powder
Amanye amagama: Hlola amaconsi, i-Matenon, i-Mibolerone powder, Hlola ama-drops powder, i-CDB-904, i-3704-9-4
Ukusetshenziswa kweMibolerone powder
Inhloso yalesi steroid ukuphazamisa umjikelezo wokuya esikhathini inja yensikazi ukuze uvimbele ukukhulelwa. Njengama-hormone amaningi e-steroid, futhi lokhu kuhlanganisa ibanga lezilwane, akubanga isikhathi eside ngemuva kokuqala kwayo ukuthi abagijimi nabazimba bomzimba bathola ukusetshenziswa.
Hlola ama-Drops ingenye ye-anabolic steroids enamandla kunazo zonke ezake zenziwe. Ibuye futhi enye ye-steroids eyinkinga kakhulu eyenziwe ngokwemiphumela emibi. Lokhu akuyona i-steroid esetshenziswa kaningi ngama-bodybuilders noma abadlali. Ngokuvamile uzothola ukusetshenziswa kwayo kuphela ekuncintisaneni noma kokuncintisana kwamandla. Abanye abakhi bomzimba bazoyisebenzisa ngaphambi kokuncintisana ukuze basize emavikini okugcina noma ngenkathi engekho-inkinga ye-push extra, kodwa akuyona into ejwayelekile yokwakha umzimba. Sizoqonda ukungabi nesikhala kwe-steroid kubaningi bomzimba njengoba siqhubeka.
Iyiphi isilinganiso seMibolerone powder
Abagijimi abaningi basebenzisa ama-5mgs mayelana ne-30min ngaphambi kokuqeqesha noma ukuncintisana. Akulona ngempela "okunamathiselwe" nganoma yini ngaphandle kwekhadiarine. Ngokuvamile kusetshenziswe ngaphambi nje kokubalulekile kokuqeqeshwa noma ukuncintisana. Abagijimi abaningi asebevele basebenzise ama-steroids ezinzima ezifaka amaconsi amasheya njengesithuthukisi se-pre-event.
Hlola amaconsi athathwa ngomlomo futhi kufanele athathwe nsuku zonke. Amanani ngokuvamile awela ku-200-300mcg ububanzi bosuku kodwa angakhuphukela ku-500mcg ngosuku ngamanye amacala. Amanani athathwa njalo ngaphambi kokuqeqeshwa, cishe amaminithi angu-30-40 ngaphambi kokuqeqesha, ukulwa noma umcimbi. Azikho izifo zokwelapha eziphakanyisiwe njengoba le steroid engakaze isetshenziswe ngemithi ngenhloso yomuntu.
Indlela i-Mibolerone powder esebenza ngayo
Hlola amaconsi ukulungiswa kwamanzi we-steroid Mibolerone powder (i-CAS 3704-9-4), esetshenziselwa izibuko zomzimba, abagibeli bamandla, abagijimi bamandla kanye nabaqaphi, konke ngenhloso yokwandisa ukuhlukunyezwa nokusebenza ngosuku lomncintiswano. Hlola amaconsi aphumelelayo uma asetshenziselwa imizuzu ye-30 ngaphambi kokuncintisana. Umsebenzisi uzothola ukuhlukunyezwa okwandisiwe, ukugxila nokushayela okuncintisana. Nakuba le steroid ayinakho ukuvuselela okuqondile, ibonisa isenzo esibonakalayo kakhulu ku-CNS (System Central Nerveous) ngokuhlobo oluphezulu lwe-androgen. Lesi yisona sizathu kuphela ukuthi lesi sidakamizwa sisetshenziselwa abagijimi, njengoba ukuzuza kwemisipha akunakuqondwa nalesi sidakamizwa.
Ayikho ubufakazi bangempela bokuthi u-anecdotal noma okunye ukuthi abagijimi basebenzisa Ukuhlola amaconsi "emjikelezweni" njengoba kuvamile namanye ama-steroids. Kubonakala sengathi leli steroid liye lafaka isimangalo esiqinile njenge-steroid esandulela isenzakalo sokukhetha ukwandisa ukuhlukumezeka nokushayela okuncintisana. Kodwa-ke, akukho ukuzuza okukhulu emzimbeni we-muscle kungafinyelelwa kulo muthi ngenxa yokuthi kungasetshenziswa kuphela ngeviki elifushane le-2, ngama-5mg amanani amancane. Noma yisiphi isikhathi esengeziwe kuso, noma umthamo onzima kakhulu, nokukhathazeka kwezempilo kuseduze.
Inothi elibalulekile: Ukubuyiselwa kwemvelo kungabikho umonakalo okwenziwe kwi-Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis nokuthi akukhona isimo esingaphansi kwesimo sezinga esasikhona.
· I-hepatotoxicity: Njengawo wonke ama-C17-aa anabolic steroids Hlola ama-drops ayingozi kakhulu esibindi. Isilinganiso nokubaluleka kokushushumbisa kusuka ku-C17-aa steroid kuya kwesinye kuyahlukahluka kakhulu; ezinye zinobuthi kodwa buthule kodwa, kodwa lokhu akuyona emnene. Hlola ama-Drops angaba nomunye wemithelela enamandla kakhulu, engalungile kuma-enzyme we-fox azo zonke i-C17-aa steroids. Izindinganiso zesibindi ziyokhula ngokuphawulekayo futhi eziningi zizofakwa esibindi.
Uma unesifo sesibindi akufanele usebenzise le steroid. Ukusetshenziswa kufanele futhi kugcinwe kuma-2-3 amaviki kuphela futhi akufanele isetshenziswe nganoma iyiphi enye i-C17-aa steroid. Ngaphezulu kwemithi yokwelapha kumele futhi igwenywe uma kunokwenzeka ukuthi abaningi banesifo esinobuthi futhi lokhu kuzobangelwa ukwanda kwesibindi esengeziwe. Kubalulekile futhi ukuthi umsebenzisi ugweme ukuphuza utshwala ngenkathi esebenzisa futhi engeza ngokuhlanza kwesibindi. Ukwehluleka ukwenza lezi zinto kungabangela izinkinga zesibindi, futhi kwabanye abasebenzisi ukucindezeleka kungase kube kuhle ngisho nalapho wenza konke okulungile.
I-Mibolerone powder Marketing
Ingabe i-Mibolerone powder Inayo Yimuphi Umphumela Wecala
Imiphumela emibi ye-Check Drops iningi. Lokhu kungenye ye-steroids eyingozi kakhulu yama-anabolic esake yenziwe. Ngenxa yokuthi imiphumela emibi ye-Check Drops inamandla kakhulu lokhu akuyona umuntu wesifo steroid okufanele asebenzise ngempela. Kunezinketho eziningana ezingcono. Ukwanda okwedlulele kushiwo ngaphambi kokuthi ukulwa kungase kube nzima, kepha izingozi zizobe ziba ngaphezu komvuzo ngale steroid. Lokhu akusho ukuthi umuntu uzofa, futhi kungenzeka imiphumela emibi ye-Check Drops igwenywe ngezinga (angeke igwenywe ngokuphelele).
· I-Estrogenic: Imiphumela emibi ye-Estrogenic noma i-Check Drops kungenzeka kakhulu ngoba le steroid iyinhlangano ye-progestin futhi iyancipha kakhulu. Imiphumela emibi ye-Check Drops ingabandakanya i-gynecomastia, ukugcinwa kwamanzi nokucindezela kwegazi okuphezulu okuhambisana nokugcinwa kwamanzi okunzima. Kodwa-ke, ngoba ukusetshenziswa ngokuvamile kuphila okufushane futhi amanani asetshenzisiwe aphansi (kuthatha kancane kakhulu iMibolerone powder ukwandisa ubuhlungu) imiphumela yesrogenic ayibonakali njalo.
Ukusetshenziswa kwe-Aromatase Inhibitors (i-AI) njengo-Anastrozole (Arimidex) ingavikela emiphumeleni emi-estrogenic ye-Check Drops. Lokhu kuzohlinzeka ukuvikelwa ku-estrogen ne-progesterone ehlobene. Nokho, umsebenzi we-estrogenic unamandla kakhulu kungenzeka ukuthi izinkinga zikhona kwamanye amadoda.
· Androgenic: Imiphumela emibi ye-androgenic ye-Check Drops ingabandakanya i-acne, ukukhula kwezinwele zomzimba kanye nokulahlekelwa izinwele emadodeni asetshenziselwa ukulinganisa iphathini lesilisa. Imiphumela emibi ye-androgenic ye-Check Drops ingase ihlanganise nezimpawu ze-virilization kwabesifazane; Empeleni, i-virilization kwelinye izinga iqinisekisiwe.
Ngokuba i-genetics yomsebenzisi wesilisa izonquma ubukhulu bemiphumela emibi ye-androgenic. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi i-androgenicity ye-hormone ayikwazi ukunciphisa ngokusebenzisa i-5-alpha reductase inhibitor njenge-Finasteride; ngeke basebenzise.
· I-Cardiovascular: Imiphumela emibi ye-Check Drops ingabandakanya lezo zesimo senhliziyo esiqinile. Le steroid ingaba nzima kakhulu nge-cholesterol negazi. Ingaba nomthelela omkhulu kwi-cholesterol ye-HDL (i-cholesterol enhle) ne-LDL cholesterol (i-cholesterol embi). Uma lowo muntu enemibandela ye-cardiovascular, ekhona noma ekhona, akufanele asebenzise le steroid.
Labo abasebenzisa le steroid bazofuna ukuqinisekisa ukuthi baphila indlela yokuphila enobungane yempilo. Ukudla okunempilo okucebile ama-acids ama-omega futhi okuphansi kwamafutha agcwele kanye noshukela olulula kubaluleke kakhulu. Umsebenzi ohlala njalo we-cardiovascular is also important, ngakho-ke uma ungenakuyingxenye yesimiso lesi steroid akusikho kuwe. Abasebenzisi kufanele bahlanganise nge-cholesterol antioxidant futhi bagcine iso eliseduze kakhulu emzimbeni wabo wezinhliziyo.
· Testosterone: Hlola ama-drops uzokuvimbela ukukhiqizwa kwakho kwe-testosterone yemvelo futhi uzokwenza ngokuphawulekayo. Ukusetshenziswa kwe-testosterone okungajwayelekile kuyadingeka uma kufanele kugwenywe isimo se-testosterone esiphansi. Nakuba ukusetshenziswa ngokuvamile kuphila okufushane nge-steroid, isikhathi sokusebenzisa ngeke sigweme ukucindezelwa kwe-testosterone yemvelo okubangelwa i-steroid futhi futhi ngeke kube ne-genetics yomuntu ngamunye.
Uma ukusetshenziswa kwalesi steroid sekuphelile futhi wonke ama-steroid asuse uhlelo, ukukhiqizwa kwe-testosterone yemvelo kuzoqala futhi. Nokho, Kunconywa ukuthi i-Post Cycle Therapy (PCT). Lokhu kuzokwenza ngcono ukutakula; ngeke kuqinisekiswe futhi ngeke kuwuqedele, kodwa kuzokwenza ngcono ukuhluleka kokuthola kahle. Njengawo onke ama-steroids, njalo kuhlale kungengozini yokungatholi ngokugcwele, futhi lokhu kufanele kucatshangelwe ngaphambi kokuba ukusetshenziswa kuqale.
Indlela yokuthenga i-Mibolerone powder kusuka ku-AASraw
I-Mibolerone powder Recipes: